Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem njem » Ebe njem iri kacha elu maka ndị njem solo n'afọ a
Njem njem • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Iceland • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Njem njem naanị na -emepe ọtụtụ ohere na nnwere onwe, na -enye gị ohere ịme atụmatụ nke gị, mee ndị enyi ọhụrụ na ito eto dị ka mmadụ.
Iceland bụ mba enweghị nchekwa, yana akara nchekwa nchekwa dị 76.2 yana akara ọkwa mpụ dị 23.8.
A maara Malta maka njikọ akụkọ ihe mere eme ya na ọtụtụ usoro eze na ọtụtụ ebe ewusiri ike na ụlọ arụsị ha hapụrụ.
A ma Portugal ama maka ọmarịcha ala ya, osimiri na ihe owuwu ya, yana nnukwu nri mmiri, mana ọ bụkwa obodo enyi na enyi.
Ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye na -enwe mmasị ịtụba akpa ha n'ime nchekwa akpa ozugbo ị bịarutere wee pụọ ebe ahụ na -enyocha obodo ọhụrụ n'onwe gị, mgbe ahụ ị chetụla echiche ịmalite njem njem naanị gị?
Ma ndị enyi gị enwetabeghị nsogbu njem dị ka gị, ị kpọrọ asị ibu arọ site na ịhazi ndị ọzọ, ma ọ bụ na ịchọrọ ị were obere akpa wee hụ ebe njem ga -ewe gị, enwere ọtụtụ ihe kpatara ya. ime njem naanị nwere ike bụrụ ahụmịhe na -akwụghachi ụgwọ nke ukwuu.
Mana ma ị si n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị pụta ozugbo ma ọ bụ na ị na -achọ ahụmịhe ọhụrụ ma emesịa ndụ, njem nke gị nwere ike bụrụ ahụmịhe na -akụda mmụọ, yabụ ndị ọkachamara njem njem enyochala ọtụtụ ebe gburugburu ụwa. chọpụta nke kacha mma, kacha dịrị nchebe, na ebe kachasị ọnụ maka njem naanị.
E wepụtara nsonaazụ ọmụmụ a taa na -ekpughe mba kachasị mma n'ụwa maka njem naanị na 2021.
Nchọpụta a lere anya dị ka ọnụ ahịa ụgbọ njem ọha, mpụ na nchekwa, ọnọdụ okpomọkụ, ọnụ ahịa ụlọ nkwari akụ, ogo ụlọ mbikọ, ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ihe nkiri, ihe omume otu na mmiri ozuzo.
Mba 10 kachasị elu maka njem naanị:
n'usoro Country Akara Njem Solo /10